यौ ’न अं’गमा गरिने चु’म्बनले भन्दा यो भाग’मा गरिने चु’ म्बन’ले महिला’लाई १०० गुणा बढी उ’त्ते’जित बनाउँछ!” – Krazy NepaL
यौ ’न अं’गमा गरिने चु’म्बनले भन्दा यो भाग’मा गरिने चु’ म्बन’ले महिला’लाई १०० गुणा बढी उ’त्ते’जित बनाउँछ!”
November 18, 2020 637
धेरै जसो साना बच्चाहरु दिनमा मज्जाले सुत्दछन् तर रातमा भने रोइ बस्दछन् । बच्चाको यस्तो ”बानीले आमाहरु भने निकै हैरान हुन्छन् र रातभर” जाग्राम’ बस्न बाध्य हुन्छन् ‘। आखिर धेरै ब’च्चाहरु किन रा’तमा धेरै रु’न्छन् त ? यसमा’ विशेष कारण छन् विज्ञहरुका अनुसार बच्चाहरु जन्मिएर यो दुनियामा” आएपछि नै हरेक दिन नयाँ अनु”भुति गरिरहेका हुन्छन् र नयाँ नयाँ अनुभव बटुलीरहेका हुन्छन् । कहिलेकाहीँ यस्ता अ;नुभवहरुको बीच’मा उनीहरुले निकै असहज महसुस गर्दछन् ।
जसका कारण कति’पय नवजात ‘शिशुह;रुमा हाछ्यूँ ‘आउने पनि हुन्छ र क’हिलेकाहीँ निद्रामै एक्का”सी ब्युझिन्छन् पनि अनि रुन थाल्दछन् । कहिलेकाहीँ बच्चा रोएका कारण शारीरिक समस्या पनि हुन’;;सक्छ । कहिलेकाहीँ बच्चाको आसपासको तापक्रम निकै गर्मी वा चिसो हुँदा पनि बच्चाको निद्रामा
सुत्ने बेलामा मोबा;ईल फोन ;प्रयोग गर्ना;ले मेटा;बलिज्म प्रोसेसमा असर पर्छ । ;”जसले गर्दा हाम्रो तौल बढ्छ ।
सुत्ने बेलामा मोबाईल प्रयोग गर्नाले हामी त ;थाक्छौ नै यसका साथै हाम्रो ब्रे;न पनि थाक्ने; गर्छ । जसका ;कारण कुनै पनि समस्याको सजिलै; समाधान निकाल्न ;सकिदैन । हामीमा सोच्ने शक्तिको कमी हुन्छ ।
सुत्ने बे;ला मोबा;ईल फोनको प्रयोग;; गर्नाले दिमागलाई ;धेरै सोच्नु;; पर्ने हुन्छ । जसका कारण मेमोरी लसको समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्छ ।
अंधेरो;मा मोबाईल प्रयोग गर्नाले आँखामा धेरै प्रेशर पर्छ । जसले गर्दा आँखा रातो र कमजोर हुने समस्या हुन सक्छ । यसले आँखाको समस्या बढ्ने गर्छ ।
यदि तपाँई मोबाईल छेउमा राखेर सुत्नुहु;न्छ भनेपनि तपाईको ;लागी ख’तरा पनि छेउ;;मै हुन सक्छ । मोबाईल; छेउमा राख्दा नोटीफि;केशन अन अफ ,र भाईब्रेशनका कारण निन्द्रा गडबड हुन्छ । निन्द्रा पुरा भएन भने हामीलाई काम गर्न कठीन पर्छ ।
मोबाई;लको प्रयोग रातीमा गर्नाले फोकसमा समस्या हुन्छ । यसले हामी;मा ध्यान दिने ;;र सुन्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ । डिप्रेसन ;यदि तपाई मोबाइल चलाईरहनु हुन्छ; भने तपाईलाई डिप्रेसन भएको हुनसक्छ ।
*************पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *******************
Prev“अत्याधिक से’क्सी देखिएको भन्दै यी नायिका’लाई सर’कारले लगायो प्रतिब’न्ध(हेर्नुहोस तस्विर सहित)”
Next“स्त’न सानो वा ठूलो हुँदैमा यौ’न सन्तुष्टि पनि त’ल–माथि’ हुने हो “
पुरुषको पूर्व प्रेमिकाले उनको श्रीमतीलाई लेखेको मुटु विजाउने पत्र
सबैभन्दा कन्जुस हुन्छन् यी राशिका मानिस , तपाईको कुन राशि ? (12843)